Umntu uphuhliso lwentlalo, sonke siphila kuluntu, kuluntu. Sineembalo ezinxibelelwano, eziquka izihlobo zethu, abahlobo, abahlobo, oogxa nabo, abaqhelana nabo.
Ukuba izalamane zinikezelwa yi-destiny, ngoko sikhetha abahlobo, abahlobo kunye nabazithandayo. Kuze kube kutshanje, iminyaka elishumi ukuya kwimashumi amabini edlulileyo sasizilana esikolweni, kwinqanaba, kwiindawo ezihambahambayo, ukutyelela abantu abathandekayo kuthi, kwinqanaba langoku le nkqubela kwindlela yokunxibelelana esinokukwazi ukuyi-Intanethi kwi-intanethi, ukufumana abantu abanomdla, ngabahlobo, mhlawumbi nothando lwakho. Ngaba ukhona-unalo ithuba lokwenza ulwazi oluyimpumelelo kwi-intanethi?
Ngaba zikho na iingcebiso ezinganceda ukuguqula ukutshata kwintanethi ibe nobuhlobo obuqinileyo, obunaphakade, obusondeleyo okanye obusondeleyo? Ewe, kunjalo! Kukho imithetho enjalo, ilula. Ngoko, ukuba unxunguphekile kwaye ungananto yokuthetha naye, okanye ufuna ukwabelana ngombono wakho kwimibandela ebalulekileyo kuwe, uvele uye kumasayithi athile, udibanise kwiforum, isangqa sazana nabo siya kwanda. Ukuba-uceba ukufumana ulwalamano olusondeleyo kwi-intanethi, ngoko lixesha lokuvula iimfihlelo ezincinci. Ukuze kungabikho ukuthukwa kunye nokudumala, ukuba nolwazi oluyimpumelelo kwi-intanethi kufuneka lulungiswe kakuhle kwaye lufakwe kakuhle.
Bhalisa kwisayithi lokuthandana - kukho ezininzi kwi-intanethi, khetha oko uthandayo kwaye uqhubeke! Beka ulwazi malunga nawe - zakho izinto zokuzilibazisa, umdla, imfundo, umsebenzi. Ukuchonga injongo yokuthandana, xelela abahlobo bakho abanokubakho malunga nokukhethwa kweencwadi zakho kunye nomculo, malunga naluphi uhlobo lwezemidlalo oyithandayo. Xa ubonisa ngokucacileyo ubuntu bakho, mhlawumbi uyakwazi ukukwazi ukufikelela kwi-Intanethi ngempumelelo. Beka iifoto zakho - zibhetele ezilungileyo kwaye zihluke, ziqinisekisa ubungqina bazo, ukuba kwiskrini somlenze wakho we-interlocutor kubonakala ukumamatheka kwakho okumnandi. Ngoko ke, senze amanyathelo okuqala, amathuba ethu okungazi inethiwekhi yanda. Zama ukumisela umsebenzi ngendlela echanekileyo.
Ukuba ufuna ukudlala ngothando, ufuna ukufumana umngane wakho ukutyelela iklabhu, ikhonsathi, uhambo lomnye uhambo lokubona indawo, ngoko kuya kuba nokwaneliseka kunye nokufana kwezinto ozithandayo. Yilungiselele ukuba iintlobo ezahlukeneyo zeengcebiso ezihlazo ziya kufakwa kwidilesi yakho yeprofayili. Ukuba awunomdla wesini ngexesha elinye, okanye ulwalamano oluceliweyo olungavumelekanga kuwe - lugatya nje le leta, kwaye ubeke umlobi walo uluhlu olumnyama, oluya kuqinisekisa ukuba imilayezo evela kulo mntu ayiyi kuphinda ikhubekise ukuziphatha kwakho.
Ukuba-uzibeke umsebenzi omkhulu ukuba ufumane isiqingatha sakho sesibini, ngoko ulwaziyo oluyimpumelelo kwi-Intanethi lijikeleze kwikona. Faka iiparameters zenzalo kuwe-ubulili, iminyaka. Kusuka kubaviwa abacetywayo bakhetha abantu obathandayo, kwaye musa ukugweba kuphela ngokubonakala, funda lemibuzo, uvavanye okokuqala - kuba ukuba umntu akayena uvila kakhulu ukuba anike iinkcukacha ngaye ngokwakhe, kubonisa injongo yakhe enzulu. Kwezinye iindawo uza kunikwa ukuba udlulise uvavanyo lwezengqondo ukuhambelana, ungalilahli!
Amathuba akho ekuziqhelanisa ngempumelelo kwi-intanethi iya kwanda. Xoxa nabantu obathandayo, unganqikazi ukwenza utyando kwaye wamkele isimemo. Ngoqhagamshelwano lomntu siqu, umfanekiso wakho omtsha uza kuzibonakalisa ngokugcwele ngokugqithiseleyo. Musa ukulibala, ngokuqinisekileyo, kwaye malunga nokuqapha: kuya kuba kufanelekile ukumisela umhla (ikakhulukazi wokuqala) kwindawo ephakamileyo - i-cafe, i-cinema, iqonga lokukhwela okanye ukukhwela i-skating, kwi-club yezemidlalo, kwimiboniso - eyahlukileyo! Nika ingqalelo kwisimo somtshato sakho esikhethiweyo. Ukuba ukhululekile kwaye usikhulule - qalisa ngokuqinileyo ukwakha ubudlelwane obusondeleyo, inwaba kuwe kunye nenhlanhla, sifuna ukukwazi kakuhle kwi-intanethi!
Iimfihlelo zokukhwabanisa umthandayo
Ukubamba okuhle kukubalulekileyo kumhla ophumeleleyo
Ngaba kukho ubudlelwane bokwenene kweli hlabathi?
Ndiyakumanga nini umfana okokuqala?
Inkosikazi enhle kumyeni wayo
Iimvenge zengane kunye nendlela yokuzinqoba
Amavithamini awusizo emzimbeni womntu
I-Puree esuka kwiklabishi
Amanyathelo okulungisa abantu ngeenwele ezincinci
I jelly yekhofi
Iitrobhu kunye nemifuno enobunzima bokulahlekelwa kwesisindo
Iimvuno ezifanelekileyo kunye nemifuno yeintsana
Indlela yokukrazula umntu ngesini?
Nento yokugqoka ibhatyi ebomvu
Isobho kunye neenyama
Ikhekhe le-Cottage cheese ne-polenta
Iingcamango malunga nezimpembelelo ze-mammoplasty
Isifo sikashukela kubantwana abancinci